malagasy – Blaogin'i Voniary
Rev L. DAHLE sy JOHN SIMS – Trano Printy Loterana 1984 Indray andro hono… Misionera Norveziana no nanangona ireo anganon’ny Ntaolo sy fomban-drazana Malagasy araka ny fantany ka namintina azy amin’ny boky iray. Ireo angano ireo dia ahitana ny fahendrena nananan’ireo razantsika sy ny fahaizany mandaha-teny. 1.ANGANO SY ARIRA Nino ny fisian’ny fiainan-tsy hita ny... Lire la Suite →
4 octobre 2016	 7
REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (TAPANY II)
Hoy angamba ianao hoe : « raha ampirimiko ny « écouteur » sy ny finday, ilaozako ny Facebook, dia inona izany no andaniako andro ? » Betsaka ny zavatra azonao atao, ampy ialana voly sady mampivelatra ny saina. TRANDRAKA AN-TANIMENA, NY VOLON-TANY NO ARAHANY Marina fa tsy mitovy amin’ny fiainanao andavanandro ny any ambanivohitra. Izany indrindra anefa no tokony hararaotinao mba... Lire la Suite →
Hanolotra antsan-tononkalo « FOHA FOTA-MANDRY » ny zoma 26 Aogositra izao amin’ny 4 ora tolakandro i Fanja Razah sy i Kaja ao amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Eto dia ifampizara sombintsombiny amin’ny fiainany RAZAFIMAMONJY Georges Eugène Fanja mba ahafantarantsika azy bebe kokoa. NY FIANARANA NORANTOVIKO Noho ny fankamamiako ny soatoavina Malagasy dia nandalina manokana momba izany aho ka... Lire la Suite →
Inona no itovizan’ireo horonan-tsarimihetsika malaza sy voarakitra ho tantara ireo ? Voalohany, samy tantara nofinofy (fiction) ireo, ao anaty tontolo hafa, ahitana zavaboahary sy fiainana hafa. Faharoa manaraka izany, boky avokoa ireo no navadika sarimihetika : nosoratana mpanoratra mahay ary narindran’ny mpanatontosa manan-talenta. Ary fahatelo farany, tsara dia tsara avokoa na ny boky na ny sarimihetsika : ny... Lire la Suite →
Andao hoe isika mba samy hilaza izay fihetsika fanaontsika na fanaon’olon-kafa fantatsika manambara ny maha-malagasy antsika, hatramin’ny goavana indrindra ka hatramin’ny bitika indrindra ! REHEFA MIHEVINA : VELONA… ISIKA REHETRA ! Ny ahy izao rehefa misy olona mihevina dia teneniko hoe : Velona ! Raha izaho indray no mihevina ka misy miteny tahaka izany dia valiako hoe : Isika rehetra ! FRANCOIS... Lire la Suite →